E gburu Jems, tụọ Pita mkpọrọ (1-5)
Mmụọ ozi kpọpụtara Pita n’ụlọ mkpọrọ (6-19)
Mmụọ ozi mere ka ikpuru gbaa Herọd (20-25)
12 N’oge ahụ, Eze Herọd malitere ịkpagbu ụfọdụ ndị nọ n’ọgbakọ.+ 2 O ji mma agha+ gbuo Jems nwanne Jọn.+ 3 Mgbe ọ hụrụ na ọ dị ndị Juu mma, o jidekwuru Pita. (Ihe a mere n’oge a na-eme Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko.)+ 4 Mgbe o jidere ya, ọ tụbara ya n’ụlọ mkpọrọ,+ nyefee ya n’aka ndị agha dị iri na isii ka ha na-eche ya nche, anọ chechaa, anọ ọzọ echee. O bu n’uche ịkpọpụta ya* n’ihu ndị Juu ma e mechaa Ememme Ngabiga. 5 Ka Pita nọ n’ụlọ mkpọrọ, ọgbakọ nọ na-ekpesi ekpere ike maka ya.+ 6 N’abalị bọtara ụbọchị Herọd bu n’uche ịkpọpụta ya, Pita nọ na-ehi ụra n’agbata ndị agha abụọ. E jikwa agbụ ígwè e kere ya kegide n’ahụ́ ndị agha abụọ ahụ. E nwekwara ndị nche nọ n’ọnụ ụzọ na-eche ụlọ mkpọrọ ahụ nche. 7 Ma, mmụọ ozi Jehova* bịara guzoro ebe ahụ,+ ìhè nwukwara n’ime ụlọ mkpọrọ ahụ. Ọ kụtụrụ Pita aka n’akụkụ, kpọtee ya, sị: “Bilie ọsọ ọsọ!” Agbụ ígwè e kere ya n’aka wee dapụsịa.+ 8 Mmụọ ozi ahụ sịrị ya: “Yiri ákwà gị,* yirikwa akpụkpọ ụkwụ gị.” O wee mee ihe ọ gwara ya. Mmụọ ozi ahụ gwaziri ya, sị: “Yiri uwe elu gị, sowe m.” 9 Pita wee si n’ụlọ mkpọrọ ahụ pụọ, soro ya na-aga. Ma, ọ maghị na ihe mmụọ ozi ahụ na-eme bụ n’ìhè. N’eziokwu, o chere na ọ na-ahụ ọhụụ. 10 Ka ha gafere ndị nche nke mbụ na ndị nke abụọ, ha ruru n’ọnụ ụzọ ámá e ji ígwè mee, nke e si abanye n’obodo, ụzọ ahụ emeghee n’onwe ya, ha agafere. Mgbe ha gafechara, ha gatụrụ obere n’okporo ámá, ozugbo ahụkwa, mmụọ ozi ahụ hapụrụ ya. 11 Mgbe Pita matara ihe na-emenụ, ọ sịrị: “Ugbu a ka m matara n’eziokwu na Jehova* zitere mmụọ ozi ya wee napụta m n’aka Herọd, napụtakwa m n’ihe niile ndị Juu nọ na-atụ anya na a ga-eme m.”+ 12 Mgbe o chechara ihe a, ọ gara n’ụlọ Meri nne Jọn. Aha Jọn a bụkwa Mak.+ Ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Jizọs zukọtara ebe ahụ na-ekpe ekpere. 13 Mgbe ọ kụrụ aka n’ụzọ, otu nwa agbọghọ na-eje ozi, onye aha ya bụ Roda, bịara ịmata onye na-akụ aka. 14 Ozugbo ọ nụrụ olu Pita, ọṅụ ekweghị ya meghee ụzọ, kama ọ gbabara n’ime ụlọ ma gwa ndị nọ ebe ahụ na ọ bụ Pita guzo n’ọnụ ụzọ. 15 Ha sịrị ya: “Ị maghị ihe ị na-ekwu.” Ma ọ nọ na-ekwusi ike na ọ bụ Pita. Ha asịzie: “Ọ bụ mmụọ ozi.”* 16 Ma Pita ka nọ ebe ahụ na-akụ aka. Mgbe ha meghere ụzọ, ha hụrụ ya, ya eju ha anya. 17 Ma o feere ha aka ka ha nọrọ jụụ. O wee kọọrọ ha ihe niile banyere otú Jehova* si kpọpụta ya n’ụlọ mkpọrọ. Ọ sịkwara: “Kọọrọnụ Jems+ na ụmụnna ndị ọzọ ihe ndị a.” Mgbe o kwuchara ihe a, ọ pụrụ gawa ebe ọzọ. 18 Mgbe chi bọrọ, ndị agha ahụ amaghị ihe ha ga-eme eme maka na ha amaghị ihe mere Pita. 19 Herọd chọrọ Pita ebe niile, ma ọ hụghị ya. O wee gbaa ndị nche ahụ ajụjụ ma kwuo ka a kpụrụ ha gaa taa ha ahụhụ.+ Herọd wee si na Judia gaa Sizaria ma nọtụ ebe ahụ. 20 Ma, ndị Taya na ndị Saịdọn na Herọd na-ese okwu. N’ihi ya, ha ji otu obi bịa ịhụ Herọd. Ma, ha bu ụzọ gakwuru Blastọs, bụ́ onye na-elekọta ụlọ ya,* ka o nyere ha aka. Mgbe ha na ya hụchara, ha gakwuuru Herọd ka ha na ya kpezie, n’ihi na ọ bụ n’ala Herọd na-achị ka obodo abụọ ahụ si enweta ihe oriri. 21 Ka ndị mmadụ zụkọrọ n’otu ụbọchị pụrụ iche, Herọd yiiri uwe onye eze ma nọdụ ala n’oche ikpe wee malite ịgwa ha okwu. 22 Ndị ahụ zukọrọ malitere iti mkpu, sị: “Olu ya bụ olu chi. Ọ bụghị olu mmadụ!” 23 Ozugbo ahụ, mmụọ ozi Jehova* mere ka ikpuru gbaa ya, ya anwụọ, n’ihi na ọ naara otuto e kwesịrị inye Chineke. 24 Ma okwu Jehova* nọ na-agbasa, ọtụtụ ndị ana-aghọkwa ndị na-eso ụzọ Jizọs.+ 25 Mgbe Banabas+ na Sọl butechaara ụmụnna nọ na Jeruselem ihe enyemaka,+ ha laghachiri Antiọk. Ha kpọọrọ Jọn,+ onye aha ya bụkwa Mak.
^ Ma ọ bụ “ịkpọpụta ya ka e kpee ya ikpe.”
^ Ma ọ bụ “Kee ihe n’úkwù gị.”
^ Na Grik, “Ọ bụ mmụọ ozi ya.”
^ Na Grik, “onye na-elekọta ụlọ eze na-anọ ehi ụra.”